Artiist Haayiluu Disaasaa Waggaa 62tti boqate (1955-2017) – Oromedia
Home » Uncategorized » Artiist Haayiluu Disaasaa Waggaa 62tti boqate (1955-2017)
(Oromedia,18Amajjii 2017) Bara 1955 Qeellam Wallaggaa, Qaaqee Gullisootti kan dhalatee Artisti Haayiluu Disaasaa waggaa 62tti boqote.
Haayiluu Disaasaa (1975-2017)
Magaalaa guddittii Qeellam Wallaggaa, Dambi Doollotti kan guddate Haayiluu Disaasaa Amajjii 17 bara 2017 galgala addunyaa kana irraa boqote.
Seena ajireenya isaa irraa akak huabtametti, Aartisti Haayiluun jalqaba yoo biyya irraa konkolaataa fe’umsaa yaabbatee Finfinnee dhaqe artiistii ta’uun abjuusaa hin turre.
Sagaleesaa bareedaan toora Hagar Fiqiriitti yoo sirbu garuu qalbii Iyyu’eel Yohaannis booji’uu danda’e.
Iyyu’eel baras Hagar Fiqirii keessa hojjeta ture. Hayluu waltajjiirra baasee mee sirbi jedheen. Haayiluun sagaleesaa kiiloleen waltajjii raase. Bara 1975rraa kaasee diraamaa, fiilmii, tiyaatiraa fi weellisummaan biyyasaa tajaajilaa tureera.
Haayiluun sirboota yaa warra baddaa, yee hennakoo, naggaaden haa dabartuun; sirboota ittiin beekamu keessaa isaan muraasa.
‘Warra baddaa’ sirba jedhuun bara afaan Oromoo afaan waltajjii hin taanetti hin sirbituun dhorkameet ture. Innis “Maali isinis ‘salaa bayi’ jettanii sirbitu” jechuun mormee, yeroodhaf akka hin sirbines dhorkamee, itti gaafatamaan isaanii boodderra caqasanii waan jaalataniif sirbee waltajjii ittiin sochoosaature.
Haayiluun abbaa mucaa dhiira tokkoo ture.
Sirni gaggeessaa Hagar Fiqiritti kan qophaa’e yammuu ta’u, awwaalchasaa Jimaata dhufu, Amajjii 20 bara 2017 sa’aa 11tti 4 Kiiloo Q/Sillaasetti akka gaggeeffamu beekameera.
Previous: Korri Kutaa ABO Australia milkiin xumurame; miseensotis qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf murteeffatan.
Next: Daangaa Oromiyaa irratti weerara baname ittisuu fi deebisuuf akka dirmatamu ABOn hubachiise.